Huawei Chinja Vagadziri | China Huawei Chinja Fekitori & Vatengesi
S5730-HI Series Shanduko
Huawei S5730-HI akateedzana switch haashandisi anotevera-chizvarwa IDN-yakagadzirira yakagadziriswa switch dzinopa yakagadziriswa ese-gigabit mapoti ekuwana, 10 GE uplink zviteshi, uye akawedzeredzwa makadhi slots ekuwedzera kweuplink chiteshi.
S5730-HI akateedzana switch anopa echinyakare AC kugona uye anogona kubata 1K APs. Ivo vanopa yemahara yekufambisa basa kuti ive nechokwadi chinowirirana mushandisi chiitiko uye vari VXLAN inokwanisa kuitisa network kuona. S5730-HI akateedzana switch dzinopawo yakavakirwa-mukati chengetedzo ma probes uye inotsigira zvisina kujairika traffic kuona, Encrypted Communications Analytics (ECA), uye network-wide kutyisidzira kunyengera. S5730-HI akateedzana maswitch akakodzera kuunganidzwa uye yekuwana matura epakati- uye makuru-kadiki kambasi network uye yepakati rukoko rwemusasa webazi network uye diki-saizi kembasi network.
S5730-SI Series Shanduko
Iyo S5730-SI akateedzana switch (S5730-SI kwenguva pfupi) anotevera-chizvarwa standard gigabit Layer 3 Ethernet switch. Iyo inogona kushandiswa seye yekuwana kana yekubatanidza switch pane kambasi kambasi kana seye yekupinda switch mune data data.
Iyo S5730-SI akateedzana switch inopa inochinjika yakazara gigabit kuwana uye inodhura-yakamisikidzwa yakagadziriswa GE / 10 GE uplink chiteshi. Zvichakadaro, iyo S5730-SI inogona kupa 4 x 40 GE uplink ports ine interface kadhi.
S6300 switch (S6300 ipfupi) anotevera-chizvarwa bhokisi-rakaumbwa 10-gigabit switch dzinogadzirwa neHuawei yekuwana 10-gigabit maseva munzvimbo yedata uye inoshandura michina pane Metropolitan Area Network (MAN) kana kambasi network. Iyo S6300, imwe yeakanakisa-mashandiro ekushandura muindasitiri, inopa yakakwira ye24 / 48 yakazara-mutsara-kumhanya 10-gigabit maficha, ayo anopa mukana kune yakakwira-density kuwana kune gumi-gigabit maseva mune data nzvimbo uye yakakwira. - kuwanda kwekubatana kwe10-gigabit zvishandiso pane kambasi network. Uye zvakare, iyo S6300 inopa akasiyana siyana maficha, akakwana ekuchengetedza chengetedzo matanho, uye akawanda QoS ekudzora mamodesi kuzadzisa izvo zvinodiwa zve data nzvimbo yekuwedzera, kuvimbika, manejimendi, uye chengetedzo.
Quidway S5300 Series Gigabit Inoshandura
Quidway S5300 yakateedzana gigabit switch (inozonzi S5300s) chizvarwa chitsva Ethernet gigabit switch dzinogadzirwa neHuawei kuzadzisa zvido zvepamusoro-bandwidth kuwana uye Ethernet yakawanda- sevhisi kusangana, ichipa yakasimba Ethernet mashandiro evatakuri uye vebhizinesi vatengi. Zvichienderana nechizvarwa chitsva chakakwira-chinoshanda Hardware uye Huawei Versatile Routing Platform (VRP) software, iyo S5300 inoratidzira hukuru hukuru uye gigabit maficha ehuremu hwakakura, inopa 10G uplinks, inosangana nezvinodiwa nevatengi zveiyo 1G uye 10G uplink zvishandiso zvehuwandu hwehuwandu. Iyo S5300 inogona kusangana nezvinodiwa zvezviitiko zvakati wandei sekushandurwa kwevhisi pamisasa yekambasi uye maIntranet, mukana weiyo IDC pachiyero che1000 Mbit / s, uye mukana wemakomputa pachiyero che1000 Mbit / s pane intranet. Iyo S5300 chishandiso chakaita kunge kesi ine chassis ye1 U yakakwira. Iwo S5300 akateedzana akaiswa muSI (akajairwa) uye EI (akasimudzwa) mamodheru. Iyo S5300 yeiyo SI vhezheni inotsigira Layer 2 mashandiro uye yakakosha Layer 3 mashandiro, uye iyo S5300 yeEI vhezheni inotsigira yakaoma nzira dzekufambisa nzira uye zvakapfuma sevhisi maficha. Mhando dzeS5300 dzine S5324TP-SI, S5328C-SI, S5328C-EI, S5328C-EI-24S, S5348TP-SI, S5352C-SI, S5352C-EI, S5324TP- PWR-SI, S5328C-PWR -PWR-EI, S5348TP-PWR-SI, S5352C-PWR-SI, uye S5352C-PWR-EI.
S2700 Series haizoshandisi
Yakanyanya scalable uye simba-inoshanda, S2700 Series Swichi inopa Fast Ethernet 100 Mbit / s kumhanya kwemabhizimusi macampus network. Kubatanidza advanced switching technology, Huawei's Versatile Routing Platform (VRP) software, uye yakazara yakavakirwa-mukati chengetedzo maficha, akateedzana aya akakodzera kuvaka uye kuwedzera ramangwana-rinotarisana neRuzivo Technology (IT) network.